Farmaajo oo fashilinaya safarka RW Rooble ee Sacuudiga | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo fashilinaya safarka RW Rooble ee Sacuudiga
Farmaajo, ayaa tallaabo kasta u qaadaya inuu fashiliyo socdaalka wafiga heerkiisu sarreeyo ee dhawaan ku wajahan boqortooyada Sacuudi Cabariya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa isku dayaya inuu fashiliyo safarka la rajeynayo in ay dhawaan dalka Sacuudiga ku tagaan, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaaarsinta Maxamed Xuseen Rooble, iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Sida ay xaqiijinayaan ilo xog ogaal ah, Farmaajo ayaa todobaadkaan labo waraaq u diray safiirka Sacuudiga oo fadhigiisu yahay Nairobi, isla-markaana wuxuu qadka taleefanka kula hadlay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, si uu gacan uga siiyo fashilinta safarkaan.
Farmaajo, ayaa rumeysan in Sacuudigu, madaxda uu casuumaadda u soo diray siin doono (Sako Siyaasadeed) taas oo khatar ku noqon karta rajadiisa dib u doorashada.
Xiriirka diblumaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Sacuudiga ayaa aad u xumaa Saddexdii sano ee la soo dhaafay, kadib markii dowladda Qatar, ay Fahad iyo Farmaajo ku amartay in hoos loo dhigo calaaqaadka, Sacuudiga iyo Imaraatka.
Sacuudiga, waxa ay joojiyeen lacag sanadle ah oo ay ku kaabi jireen miisaaniyadda dalka, kadib markii uu dhamaaday waqtigii sharciga ahaa ee Farmaajo oo kooxdiisu ay boob kula kaceen xoolihii dadweynaha iyo lacagtii ku jirtay qasnadda dowladda, si ay kuraas Baarlamaan ugu helaan.
Dhawaaan Madaxtooyadu waxa ay isku dayday in ay hor istaaagto, socdaalkii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku tagay dalka Kenya, halka todobaadkaan koox ka socota xaafiiska Farmaajo ay tageen Abu Dhabi, si loola heshiisiiyo Amiirka dalkaas Khalifa bin Zayed Al Nahyan, oo qudhiisu casuumaad u soo diray RW Rooble.